We She Me: အော်တိုမက်တစ် သားသားရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့် မွေးနေ့
| FLAGS: Birthday , He
P.Ti - 5/24/09, 7:32 PM
Happy Birthday သားသား ထူးမြတ်လင်း...
သက်ဝေ - 5/24/09, 7:39 PM
Happy Birthday သားသား မောင်ထူးမြတ်...
Remote Control ကိုင်ပြီး ရယ်နေတဲ့ပုံလေးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ... သွားသေးသေးလေးတွေနဲ့...
MrDBA - 5/24/09, 8:22 PM
Happy Birthday သားသားလေး။
Mie - 5/24/09, 8:27 PM
Happy Birthday ပါ သားသားလေးရေ....ထူးချွန်လိမ္မာတဲ့ သားလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေ....
Anonymous - 5/24/09, 8:32 PM
မွေးနေ့ နှစ်တရာကျော်တိုင် ပျော်ရွှင်သောဘ၀ လေးကို ရရှိပါစေ သားသားအော်တိုမက်တစ်လေးရေ..
JuneOne - 5/24/09, 8:59 PM
အိ - 5/24/09, 9:25 PM
အကို အန်ဒီနဲ့ အမ
သားနဲ့သမီးပုံတွေ လာလာကြည့်ဖြစ်တယ်။ သမီးကလည်း သမီးလို ချစ်စရာကောင်းတယ်။ သားမျက်နှာလေးက ပိုအေးချမ်းသလိုပဲ။ နှစ်ယောက်လုံး ချစ်စရာ ကောင်းတာပါပဲ။
သမီးက အခု ဗိုလ်ကျသလို ရှိပေမယ့် နောက်ကျတော့လည်း အမကြီးကပဲ ပိုညှာပါလိမ့်မယ်။
အိငယ်ငယ်က အမေက ရှေ့က အကို၂ယောက်လုံး ဆုံးသွားတော့ ငါ့သမီးလေး လောကထဲ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်တော့မှာဆိုပြီး ညီမလေးကို အသက်နဲ့ ရင်းပြီး လေးခါမြောက် ဗိုက်ခွဲမွေးပေးထားတာတဲ့။
အဲလိုပြောတော့ ဒီကလေးလေးက အမေက ငါ့ကို ပေးထားတဲ့ အထုးလက်ဆောင်လေးဆိုပြီး ချစ်ရတယ်။ မနာလိုတာ မတည့်တာ မဖြစ်ခဲ့ရဘူး။ အခုမှ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ပြောတတ်တဲ့ အမေ့ကိုလည်း ပိုချစ်ရတယ်။ ညီမလေးကိုလည်း ချစ်ရတာပါပဲ။
သား တစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက် အိပ်မက်ကို အိတို့လင်မယား နှစ်ယောက်လည်း မက်နေကြတော့ ကလေးတွေ လာလာကြည့်ရတာ ပျော်တယ်။
Rita - 5/24/09, 9:43 PM
Happy Birthday ပါ ကလေး!
ပန်းခရမ်းပြာ - 5/24/09, 9:46 PM
T T Sweet - 5/24/09, 10:22 PM
T T Sweet - 5/24/09, 10:24 PM
ကျွန်မလဲ သမီးအတွက် အဲလိုအမြဲဆုတောင်းတယ်။ ခလေးကို pressure တွေ မပေးချင်ဘူး။ သူ့အလိုလို ကျောင်းကပေးတဲ့စာနဲ့သူ့ဟာသူလုပ် ... နားလည်ပြီး အော်တိုမက်တစ် တတ်သွားတာ နားလည်သွားတာမျိုးဖြစ်စေချင်တယ် ... စလုံးမှာတော့ ကျောင်းကြီးမတက်ခင် k1 k2 (သူငယ်တန်း) မှာကို အိမ်ခေါ်သင်ပြီး ကျူရှင်ယူနေရပြီ။ အော်စီမှာတော့ ခလေးတွေ အတော် သက်သာတယ်လို့ကြားတယ်။ အော်စီများ မတော်လို့ ပြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင် စဉ်းစားတဲ့ အထဲ သမီးပညာရေးက အဓိကဖြစ်နေမလားပဲ။
စကားမစပ် ... သားလေးက အတော်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ။သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက် အားကျပါ၏။
Happy Birthday ပါ ... သားလေး ထူးမြတ်လင်း...
sin dan lar - 5/24/09, 10:55 PM
သူ့အစ်မ တီးခါနီးကျ ခေါင်းလေးထိုးခံပေးတယ်ဆိုလို့ သနားလိုက်တာ...။
အစ်မက နာအောင်မလုပ်လောက်ဘူးလို့ သိနေလို့လည်း နေမှာပေါ့နော်...။
ကောင်းကင်ပြာ - 5/24/09, 11:37 PM
ံ့Happy birthday ပါ သားသားရေ
rita - 5/24/09, 11:42 PM
ko htoo lay yay,,,,
Kay - 5/25/09, 12:25 AM
တနှစ်ပြည့် သားလေး ထူးမြတ်လင်း အတွက်-
( ဖြေ ကြည့်)း))
Khaing - 5/25/09, 12:36 AM
Happy Birthday Thar Thar Htoo Myat Linn!!! :)
Anonymous - 5/25/09, 1:51 AM
အပြစ်ကင်းတဲ့ ကလေးပုံလေးတွေ ကြည့်ရတာ စိတ်အေးချမ်းလိုက်တာ။ သားသား တသက်လုံး စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ။
khin oo may - 5/25/09, 3:22 AM
့happy birthday ထူးမြတ်လင်း
Anonymous - 5/25/09, 3:57 AM
Happy Birthday Thar Thar Htoo Mayt Lynn!
Wish you happiness, good health and success in your life.
sawminnpyo - 5/25/09, 5:52 AM
သား နဲ. သမီးရှိတဲ့ အတွက်ကံကောင်းပါတယ်..နှစ်တိုင်း ပျော်ရွှင်တဲ့ မွေးနေ.များစွာ ဆင်နွဲနိုင်ပါစေ
Anonymous - 5/25/09, 2:25 PM
Ur kids r so cute!
I always visit ur blog to see ur kid pics.
Shinlay - 5/25/09, 5:46 PM
Happy Birthday thar Thar.
ကျမမှာ ကလေးမရှိတော့ ကလေးရှိတဲ့မိသားစုတွေ မြင်ရရင်
nu-san - 5/25/09, 9:50 PM
ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ.. ရီနေတာများ သိပ်အသက်ပါတာပဲ.. Happy Birthday ပါ သားသားရေ..
ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ သားလိမ္မာလေး ဖြစ်ပါစေ.. ;)
Anonymous - 5/25/09, 11:22 PM
ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ..သားလေးက...ပါးနှစ်ဖက်ကို အားရပါးရ အာပွားပေးပြီးနမ်းထည့်လိုက်ချင်တယ်...တစ်ပြိုင်နက်တည်းပါးကို ကိုက်ပါကိုက်လိုက်ချင်တယ်...ချစ်စရာကောင်းပြီးအသည်းယားလွန်းလို့ပါ..
MANORHARY - 5/25/09, 11:40 PM
Happy Birthday ပါသားကလေး ထူးမြတ်လင်း
မီးမီးချစ် - 5/26/09, 4:05 PM
ညမ လဲ ငယ်ငယ်တုန်း က မောင်တွေ ညီမတွေကို တီးသလား မမေးနဲ့..
ခုတော့ မလုပ်ရဲပါ... ကြောက် ပါ သည်..
Happy Birthday ပါ ... သားလေး ထူးမြတ်လင်း
Anonymous - 5/26/09, 6:42 PM
ကလေးလေးက ချစ်စရာလေး... like mother, like son ပေါ့နော်....
Don't mind ko Andy... ပဲာပဲာ ( အဖေတူလို့ မပြောလိုက်လို့ )
Happy Birthday Htoo Myat Linn!!!!!
Myo - 5/27/09, 5:01 AM
ကျွန်တော်လည်းသားလေးလိုချင်တာ အခုသမီးလေးဘဲထပ်ရအုံးမယ်၊ ဘာဘဲပြောပြောသမီးကြီးအတွက်အဖော်ရတာလို့ဘဲဆိုရမယ်၊ ရှေ့လကုန်မွေးမယ်ဆိုတော့ ရင်ခုန်နေရတယ်၊
Taungoo - 5/29/09, 1:11 AM
အပေါ်ဆုံးက ပြောင်ပြနေတဲ့ ပုံလေးက ချစ်စရာလေး။
သားသား ထူးမြတ်လင်း ပျော်ရွှင်ကျန်းမာပါစေ
Phyo Maw - 5/31/09, 12:34 AM
မိန်းမ မြန်မြန်ယူရင်ရမလား မယူရဘူးလား
ourstream - 5/31/09, 7:35 PM
happy birthday ပါ သားသားရေ...။
moemoe - 5/31/09, 9:04 PM
ကလေးလေးကချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ မိဘကိုအိုမင်းမစွမ်းဖြစ်တဲ့အထိမညိုမညင်လုပ်ကြွေးနိုင်သော သားကောင်းသားရတနာလေးဖြစ်ပါစေ
Andy Myint - 5/31/09, 9:25 PM
ဆုတောင်းပေးသွားသူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာမှတောင် မကျွေးလိုက်ရဘူး...း) စကားမစပ် တီတီဆွိ .. စင်္ကာပူမှာ ကလေးတွေကို စာတွန်းသင်တော့ ကလေးတွေ ခမျာ ပင်ပန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စင်္ကာပူကနေ သြော်ဇီ ပြောင်းတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကတော့ အရည်အချင်း စစ် စာမေးပွဲဖြေပြီးတော့ အတန်း တစ်နှစ် ကျော်တက်ခွင့်ရတယ်။ စင်္ကာပူက ကလေးတွေက ပိုတတ်တဲ့ သဘောပေါ့။
Moe Cho Thinn - 6/3/09, 2:07 PM
သားသားက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ ကိုအန်ဒီ နဲ့ ညီမရေ။
တနှစ်တောင် ပြည့်သွားပြီလား။ သူ့အမစိတ်ဆိုးရင် မျက်စိလေးမှိတ်ပြီး ခေါင်းထိုးခံပေးတယ်ဆိုလို့ သနားလိုက်တာ။ အငယ်တွေက အမြဲ အကြီးတွေကို အထင်ကြီးစိတ်နဲ့ လိုက်လိုက်လျောလျော ဆက်ဆံတတ်တယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့လဲ ပိုတော်အောင် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ကြိုးစားတတ်တယ်။
သားသားလေးမွေးနေ့မှာ အလာနောက်ကျပေမဲ့ တမိသားစုလုံးအတွက် ကံကောင်း ပျော်ရွှင် ပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်မြဲ ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါလိုက်ပါတယ်။
ပညာတတ် အဖိုးတန် ရင့်ကျက်သူ ကိုထူး ဖြစ်စေ..
BlueBerry - 6/4/09, 12:16 PM
Anonymous - 6/8/09, 5:41 PM
our brothers' culture and languages .(stole spaces reserved fro Mon,Shan,Kayah, Karen
Anonymous - 6/9/09, 6:37 PM
WeSheMe မှ auto ကိုထူးလေး ဆက်လက်ပြီး Auto ဖွံ့ဖြိုးကာ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ပါစေခင်ဗျား။ ပျော်ရွှင်သော မိသားစုဘ၀ဖြင့် ဘ၀ကို ကျေနပ်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။
Anonymous - 6/10/09, 12:05 AM
ပထမဆုံးပုံလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ ခဏခဏပြန်လာချောင်းကြည့်နေမိတယ်
မိုးကောင်းသူ - 6/12/09, 12:03 PM
မနေ့က IKEA ပို့စ်တင်ထားတာကိုရှာနေတာ တော်တော်လေးကြာသွားတယ်။ :D IKEA အကြောင်းရေးထားတာလင့်ချင်လို့ပါ။
တောင်ပေါ်သား - 6/17/09, 10:50 AM
Happy Birthday ညီငယ်လေးရေ.. ညီလေးက ချစ်စရာလေး ရီနေတာလေးက တကယ့်ကိုသာယာတဲ့ မိသားစုပဲ အကိုရေ ပျော်ရွှင်မိတယ်ဗျာ
sin dan lar - 6/19/09, 5:50 PM
ဒီနေ့ ဝီရှီမီ ဖွင့်ဖွင့်ချင်း အပေါ်ဘယ်ဖက်ထိပ်မှာ ပေါ်လာတဲ့ သားပုံလေးက သနပ်ခါးတွေ ကြောင်ကြားပြီး ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ....။ စီဘောက်စ်မတွေ့လို့ ဒီမှာ လာပြောနေတုံး တခြားပုံပြောင်းသွားတယ်..။
phyo - 9/15/09, 5:31 PM
အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ် မိသားစုဘ၀လေးကို တည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုပြီး စိတ်ထဲဝင်ဝင်လာတိုင်း ကိုအန်ဒီ ရဲ့ မိသားစု ဘလော့ဂ် အိမ်လေးကိုပဲ လာလာဖတ်ဖြစ်တယ်
Andy Myint - 9/16/09, 8:54 PM
အင်း... အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးတွေ တပြုတ်ကြီးရမှ အဲဒါ ကိုအန်ဒီ မြှောက်ပေးလို့ဆိုပြီး လာပြောမှာ မြင်ယောင်သေးတယ်..